कस्ता कलेज रोज्ने ?
सरस्वती पाण्डे ‘सरस’/एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भए पश्चात् ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ जना विद्यार्थीहरूको नयाँ शैक्षिक दिशा सुरु भएको छ । अबको शैक्षिक यात्राका खुड्किलाहरू कसरी पार गर्ने ध्याउन्नमा उनीहरू छन् । नतिजा प्रकाशित हुने वित्तिकै अहिले विभिन्न प्लस टुहरूले विद्यार्थी आफ्नो कलेजमा भर्ना गराउन तँछाडमछाड गरेको देखिन्छ । पर्चा, पम्लेट, सर्कुलर, भित्ते लेखन गरेर कलेजहरूले विज्ञापन गरेका छन् । यो हेर्दा व्यवसायिक शिक्षाको अवस्था निरन्तर बढेको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा निजी शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षाकाबिचमा गहिरो अन्तर देखा परेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूले यसरी चासो दिएर विद्यार्थीलाई आकर्षित गरेको पाइन्न ।
उच्च शिक्षाको अभिलासा लिएर गाउँबाट शहर छिर्नेहरूको लर्को पनि उत्तिकै छ । गाउँमा प्लस टु प्रशस्त भए पनि विद्यार्थीहरूको रोजाई भने शहर नै हुने गरेको छ । शहरमा शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर, चाहेको विषय अध्ययन गर्न पाइने, आफू अनुकुलको कलेज रोजाइका कारण पनि ग्रामीण समुदायका विद्यार्र्थीहरू आकर्षिक हुने गरेको बुझिन्छ । तर, आर्थिक स्तर न्युन भएका विद्यार्थीहरू भने चाहेर पनि अध्ययन गर्न नसकेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । तिनीहरूका लागि कहिले शैक्षिक पहुँच पुग्ला ? यस विषयमा सरकारले सोच्नु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी विद्यार्थीहरूलाई प्लस टुहरूले चर्को शैक्षिक नारा दिएर विद्यार्थी फकाइरहेका छन् । कलेजका भवन, खेल मैदान, प्रविधिमैत्री वातावरणजस्ता नाराबाट दिने गरेको देखिन्छ । तर, बाहिरी रूपमा यसरी देखाएर सस्तो प्रचार गरे पनि वास्तविक रूपमा उनीहरूले शैक्षिक अवस्था कस्तो छ यस विषयमा भने केही बोलेको देखिदैन । यसमा बिचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ शिक्षाका नाममा राष्ट्रिय अपराध गरिएको छ । सिकाइको तल्लो अवस्थादेखि नै शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अब यो या त्यो बहानामा शैक्षिक क्षेत्रमा अपराध गर्न पाइन्न ।शिक्षकले चाहे भने राम्रो शैक्षिक सुधार गर्न सक्छन् । शिक्षकहरूलाई आकर्षक तलब भत्ता दिएर शिक्षण सिकाइकमा लाग्नुपर्छ । विद्यार्थीले पनि विद्यालयका आकर्ष भवन, सस्तो प्रचारभन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तरतालाई बुझेरमात्रै भर्ना गर्नु उचित हुन्छ ।
अर्को कुरा पनि यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ । विद्यार्थी तथा अभिभावक विद्यार्थीले बढी जिपिए ल्याएपछि विज्ञान अथवा म्याजमेन्ट पढौं, पढाऔँ भन्ने हुन्छ । तर वास्तवमा यो गलत हो । विद्यार्थी आफूले जुन विषय पढ्न रहर गरेको छ त्यही विषय छनोट गरेर पढ्दा राम्रो हुन्छ । किन भने विषय छनोट अरूले गरेको आधारमा होइन आफूले नै छनोट गरेर पढ्दा धेरै राम्रो हुन्छ । यहाँ सुरुमा अरूको लहीलहीमा लागेर कम जिपिए ल्याएका विद्यार्थीले विज्ञान विषय पढे । तर पछि सो विषय पढ्न कठिन भएपछि मानविकी तथा शिक्षा संकाय लिएर पढ्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति विद्यार्थी तथा अभिभावकले हटाउनुपर्छ । आफ्नो रोजाइको विषयमा मेहनत गरेर अध्ययन गर्ने हो भने सफलता हात पार्न सकिन्छ । कुुनै पनि विषय आफैंमा नराम्रो पटक्कै छैनन् । जुनसुकै विषय लिएर उकृष्ट नतिजा निकाल्न सक्ने हो भने स्वदेशमै राजेगारीका सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् ।
लेखक शिक्षिका हुन् ।
प्रकाशित २0 असाढ २0७५ , बुधबार | 2018-07-04 07:39:44